Panama Nanokatra ny Lalao Fiadiana Ho Tompondaka Eran-tany Amin’ny Baseball · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2011 4:30 GMT
Nosokafana tamin'ny Asabotsy 1 Oktobra, ny fiadiana ho tompondaka erantany faha-39 ny Baseball (IBAF). Nahazo voninahitra hampiantrano azy ity i Panama tamin'ny volana Novambra farany ary sambany no nampiantrano hetsika goavana tahaka izao ity firenena malaza amin'ny fankafizana baolina fandaka ity.
Tsy ho eo amin'ny resaka fanatanjahantena ihany no hiavaka ity lanonana ity, fa hanana ny lanjany ihany koa eo amin'ny sehatry ny toekarena, araka ny lazain'ny filohan'ny Sekolim-Pirenena Ambony momba Fanatanjahantena, Ruben Cardenas, azy ao amin'ny La Prensa [es]: “Hisy fiantraikany mahafinaritra eo amin'ny toe-karem-pirenena ity fiadiana ho tompondaka mondialy ity, satria ho maro ny olona hipetraka manakaiky ny kianjabe efatra. Manantena isika hahazo mpizaha 3 arivo”.
Fidiran'ny ekipa mpandray anjara. Sary: Ana Rut Moreno, used with permission.
Nahatonga ny ankamaroan'ny Panameana ho liana amin'ny lanonana ny Fiadiana ho Tompondaka erantany eo amin'ny Baseball, feno sainakely ny arabe sy irony fahatsiarovana “Ato aminay Izao Tontolo Izao” (eo amin'ny baseball, ny “base” no itorahan'ny mpialalao ny baolina ary faritra tratrarina hahatongavana voalohany mba hahazoana isa dia antsoina hoe “home plate”).
Ahitana taratra izany fientanentanana ateraky ny lanonana izany ihany koa ny valantserasera. Ny Filoha Ricardo Martinelli (@rmartinelli) manoratra ao amin'ny kaontiny ao amin'ny Twitter:
Niteraka hafaliana eraky ny lalana ny Lalao Fiadiana ho Tompondaka Erantany amin'ny Baseball, efa vonona ny Metrobus hitatitra anay any amin'ny kianja ary hahita ireo ekipanay
Ny Minisitrin'ny fiadidian'ny Filoha, Jimmy Papadimitriu (@JDPapadimitriu), naneho hevitra andro vitsy alohan'ny fisokafan'ny lalao:
Vonona avokoa ny zavatra rehetra. Vao voalohany no hitranga ao Panama ny lanonana fanokafana ny Lalao Fiadiana ho Tompondaka Eran-tany amin'ny Baseball ao amin'ny kianjan'ny Rod Carew amin'ny Asabotsy izao. firenena 16 ho amin'ny fandresena.
Ny tranokalan'ny Lalao Fiadiana Ho Tompondaka Eran-tany amin'ny Baseball Panama taona 2011 nilaza hoe:
Nahitana seho mahafinaritra niaraka tamin'ny afomanga nanelatrelatra teny an-danitra ny Kianja Rod Carew, raha toa kosa nisy fampisehoana hiragasy Panamaniana ny tao amin'ny efitrano, nahitana dihy indizeny Panamaniana tena izy, empolleradas sy montunos mahafinaritra. Nisy ihany koa ny fampisehoana dihy navaozina, tao anatin'ny fety maroloko mahafinaritra .
Tao amin'izay nantenain'ny rehetra ny lanonam-panokafana. Niarahaba ny ekipa mpanomana ny lanonana tamin'ny alalan'ny kaontiny Twitter i Giovanni Sanchez (@GiovaniAntonio):
Nahavita zava-mahafinaritra i Panama halina. Fanokafana nampihorokoraka ravahin'ny loko isan-karazany. Arahabaina. @MundialPanama11 @EdwinECabreraU
Nanoratra ihany koa i Juan Carlos R. (JCRODNYY):
Mirehareha tamin'ilay lanonam-panokafana. Rehefa nahita ny fampisehoana aho dia tahaka ny mahatsapa ho any amin'ny firenen-kafa. Vita tamim-pireharehana teto Panama izany @MundialPanama11
Panama nandresy an'i Greeka tamin'ny isa 8 sy 3 nanditra ny fisokafan'ny lalao. Sary: Ana Rut Moreno, nahazoan-dalana ny sary.
Nitohy tamin'ny filalaovan'ny ekipa mampiantrano voalohany ny lanonana, ka nandreseny an'i Gresy 8-3. Nanoratra ny momba ny fandresen'i Panama i Dorita Jaen (@Dorita_Isabel):
@MundialPanama11 Arahabaina ny ekipako Panameanina. Alefa ry ekipako Panama mahafatifaty.